हाइकिङ संस्कृति विकासमा अग्रणी प्रकृतिप्रेमी... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
हाइकिङ संस्कृति विकासमा अग्रणी प्रकृतिप्रेमी समूहको १४३ औं हाइकिङ पुरा
सेतोपाटी संवाददाता ललितपुर, वैशाख २९
स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि हाइकिङ गराउँदै आएको ‘प्रकृतिप्रेमी समूह’ले १४३ औं हाइकिङ ललितपुरको दलचोकीमा गरेको छ।
हरेक महिनाको चौंथो शनिबार काठमाडौंमा हाइकिङ गराउँदै आएको समूह नेपालमा हाइकिङ संस्कृति विकासमा अग्रणी संस्था हो।
उसले शनिबार आयोजना गरेको हाइकिङमा तीन सय जना पदयात्री सहभागी भएका थिए ।
समूहका संस्थापक डा. उमेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा ‘आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा’ लेखिएको नीलो क्याप लगाएका पदयात्री दलचोकी पुगेका थिए।
दलचोकीमा समूहले निरोगआनन्दधाम बनाएको छ जहाँ उचित आहार, विहार र विचार (उआविवि) र साँचो ध्यानको व्यवहारिक अभ्यास गरिन्छ । त्यहाँ साप्ताहिक र मासिक आवासिय शिविर चलाइन्छ ।
समूहले विसं २०६३ चैतदेखि हरेक महिनाको चौंथो शनिबार काठमाडौंमा हाइकिङ गराउँदै आएको छ । यति लामो समयसम्म अनवरत हाइकिङ गराउने नेपालमा अर्को संस्था छैन । यस हिसाबले समूह हाइकिङ जागरणको अगुवा हो ।
समूहले उआविविबाट निरोगी हुन अभ्यास गराउँदै आएको छ । उसले उआविवि सञ्देश बाँड्न उचित विहार अन्तर्गत हाइकिङ गराउँदै आएको हो ।
हाइकिङ अभियान सुरु भएदेखि दुई पटक चौंथो शनिबार हाइकिङ हुन सकेको छैन, एक पटक बडा दशैं परेकाले र अर्को पटक १२ वैशाखको महाभुकम्प आएकाले । हालसम्म बीस हजार भन्दा बढीले समूहबाट हाइकिङ गरिसकेको समूहका अध्यक्ष पुरेन्द्रविक्रम लाखेले जानकारी दिएका छन् ।
समूहको हाइकिङमा स्वास्थ्यबर्धक खाना र फलफुल मात्र खुवाइन्छ । पानी खाने तरिका पनि सिकाइन्छ । स्वास्थ्य ज्ञान बाँडिन्छ । हाइकिङमा जंकफुड, फास्टफुड, मदिरा र मासु निषेध छ ।
समूहले धेरै राम्रा राम्रा हाइकर्स उत्पादन गरिसकेको छ । त्यहाँबाट सिकेकाहरू अचेल विभिन्न समूह बनाएर आ–आफ्नै ढंगले पनि हाइकिङ गर्दै आएका छन् ।
समूहका सदस्यहरूले मिडियामा लेखेर हाइकिङ जागरणमा योगदान पुर्‍याएका छन् । विभिन्न मिडियामा हाइकिङ र स्वास्थ्यका विषयमा कलम चलाउँदै आएकी समूहकी कोषाध्यक्ष रामदेवी महर्जनले २०७५ मा ‘हाइकिङ काठमाडौं’ पुस्तक निकालेकी छिन्। पुस्तकमा काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख हाइकिङ गन्तव्यहरूको चिनारीका साथै हाइकिङ गर्ने सरल विधि दिइएको छ ।
मासिक हाइकिङ अभियान १३ औं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा शनिबार दलचोकीको निरोगधाममा एक कार्यक्रम समेत आयोजना गरियो । कार्यक्रममा देशभर निःशुल्क स्वास्थ्य ज्ञान बाँड्न सरकारसँग सहकार्यका लागि समूहले आग्रह गर्‍यो । त्यस अबसरमा पचास पटक भन्दा बढी हाइकिङ गर्ने हाइकर्सलाई कदरपत्र प्रदान गरियो।
कार्यक्रममा संघीय संसदका सभासद नवराज सिलवाल, प्रदेश सभासद चेतनाथ संजेल, महाँकाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामचन्द्र दाहाल, नेकपा ललितपुरका अध्यक्ष हरिकृष्ण व्यञ्जनकार, नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति राजन घिमिरे, केन्जोसोम गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष तिलकबहादुर बम्जन, हाइकर्सहरू राजेश तुलाधर र उषा सुवेदी, समूहका संस्थापक अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठ, संस्थापक डा. उमेश श्रेष्ठ र समूहका वर्तमान अध्यक्ष पुरेन्द्रविक्रम लाखेले आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा लिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ३०, २०७६, ०१:३३:००